University of muLübeck - Get Higher Education in Germany, Europe
University of muLübeck
guta : muLübeck
Musakanganwa kuti discuss University of Lubeck
mu 1973, the University of Lubeck became an independent scientific institution in the state of Schleswig-Holstein. Tinopa dhigirii zvirongwa mukurapa, kombiyuta sainzi, ouinjiniya, uye sayenzi dzinongoitika. Interdisciplinary zvirongwa paakafungisisa sayenzi zvakasikwa, kombiyuta sainzi, uye mushonga kupa mazano uye kukwira kwokuwirirana dzidzo underpinned kubudikidza soro mureza zveutano. Mamiriro ezvinhu pano pakuumba uye kushandisa nzira itsva dzemuchina, Diagnostics, uye nzira dziri yakanaka, somugumisiro Kushandirapamwe pakati mano, and collaboration with other institutions in Lübeck, ari Research Center Borstel, ari Medical Laser Centre, uye nemakanzuru nemabhizimisi. Teaming-pamwe dzakawanda tsvakurudzo Kudya chinosimbisa unhu kutsvakurudza panguva yunivhesiti yedu, Pari kunorondedzerwa minda chaiwo maviri tsvakurudzo.
Ichienzaniswa nedzimwe mumayunivhesiti, Yunivhesiti muLübeck ishoma, pamwe chete 3,400 Vadzidzi - asi unozvirumbidza yakanaka mudzidzisi-mudzidzi reshiyo. Yakakwirira Standings evadzidzi edu kombiyuta sayenzi mushonga chinosimbisa dzakakwirira mureza wedu pakudzidzisa uye dzidzo.
Ndeyechokwadi kuzvionera wayo neHurumende. Izvi zvinoda kuzvidzora utungamiriri, achiita hunoshamisa tsvakurudzo pasi pose, kugovera dhimanda dzidzo, anosimbisa vaduku renyanzvi, uye nechokwadi netsvimbo zvakanaka anokwanisa. Isu kuzadzisa zvinangwa izvi kuburikidza interdisciplinary zvirongwa hunobatanidza mano zvokurapa, sayenzi zvakasikwa, uye kombiyuta nesayenzi / mapurani.
Isu kutarisira renguva kushumira varwere vari kukiriniki yedu.
dzayo kuyeuka nhengo nemasangano:
Muperekedzei dzaungagona nezivo-nemhepo huru kutsvakurudza pamwe siyana mafomu;
Bayirai chinoumbwa nezvinhu zvakawanda, enderera, dzidzo tsvakurudzo-kwakavakirwa kwakavakirwa dzidziso, ari hurongwa uye didactically zvakanaka muronga netsika kuvaka zambuko kunyika chaiyo, uye ongorora izvi nguva dzose;
Edza nokuti zvakaoma uye kunopfuurira kuchinja dhigirii zvose zvirongwa uye semesters, kuti asike uye kufambisira mberi dzidzo dzaungagona;
Pamwe pakutsvakurudza zvikoro uye mudzimba uye dzomunyika mabhizimisi, kunyanya avo inobva munharaunda;
Vari munyika nepasi rese nezvatinovavarira uye zvemakwikwi;
Ronga zvakanaka kuitira ramangwana wokukudza yunivhesiti, mano ayo uye kuchipatara, uye kuwedzera ukoshi hwavo;
Nechokwadi-soro mitemo unhu mabasa ose;
Mira nokuti kushivirira uye mutoro kusakarongeka pakati mapoka ose kuyunivhesiti uye nokuda misimboti wakanyatsojeka, kunyanya pakati pavanhu navakadzi, uye unoedza kuzadzisa izvi;
Kukurudzira nhengo dzavo kuti kutora basa;
Kuumba aifarira-semhuri uye kuumbwa kuti zvipindirane nani dzidzo nemabasa upenyu hwemhuri;
Ita mutoro, zvoupfumi, uye anokwanisa tsika kushandisa mari avakapiwa nokungwarira uye mumamiriro ezvinhu-ushamwari nzira.
pashure 1945 City Hospital East
3. Mbudzi 1964 Academy of Medicine of Lübeck (2nd Faculty of Medicine of the Christian Albrechts University of Kiel), clinical semester for the medicine degree programme
7. Chivabvu 1973 Medical School of Lübeck
10. Chivabvu 1985 Medical University of Lübeck
WS 2001/02 Molecular Biotechnology degree programme (ikozvino: Molecular Life Science)
Unoda discuss University of Lubeck ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo